Bit By Bit - Ukudala intsebenziswano yobuninzi - 5.5.6 iingcebiso kuyilo lokugqibela
Ukongezelela kule miba emihlanu yemigaqo yokuqulunqa, ndingathanda ukunikela ezinye iingcebiso ezimbini. Okokuqala, ukusabela ngokukhawuleza onokuhlangabezana nayo xa uphakamisa iphrojekthi yokusebenzisana ngokubambisana "Akukho mntu uza kuthatha inxaxheba." Kakade oko kuya kwenzeka. Enyanisweni, ukungabikho kwenxaxheba kuyona mngcipheko omkhulu wokuba iiprojekthi zentsebenziswano ezininzi zijongene. Nangona kunjalo, esi sichaso sivela ekubeni sicinge ngeemeko ngendlela engafanelekanga. Abantu abaninzi baqala kunye nabo baze basebenze: "Ndixakekile; Andiyi kwenza oko. Kwaye andiyazi umntu oya kwenza loo nto. Ngoko ke, akukho mntu oya kwenza njalo. "Endaweni yokuqala kunye nokusebenza, kunjalo, kufuneka uqale nabo bonke abantu abaxhunyiwe kwi-intanethi kwaye basebenze kuyo. Ukuba kuphela omnye kwisigidi sale bantu bathatha inxaxheba, ke iprojekthi yakho nokuba yimpumelelo. Kodwa, ukuba umntu omnye kuphela kwiibhiliyoni zabantu bathatha inxaxheba, ke iprojekthi yakho mhlawumbi iyakwehluleka. Ekubeni i-intuition yethu ayilunganga ukuhlukanisa phakathi kweyodwa-nge-million kunye neyodwa-nge-bhiliyoni, kufuneka sivume ukuba kunzima ukwazi ukuba iiprojekthi ziza kwenza inxaxheba eyaneleyo.
Ukwenza oku khonkco ngakumbi, masibuyele kwiGalaxy Zoo. Cinga ngoKevin Schawinski noChris Linton, ababini beenkwenkwezi zeenkwenkwezi behleli e-Oxford bacinga ngeGalaxy Zoo. Babengaze baqikelele-kwaye babengazange baqikelele-ukuba uAida Berges, umama ohlala ekhaya-2 ohlala ePuerto Rico, uya kugqiba ukubeka iinqwelwana zamagalaki ngeveki (Masters 2009) . Okanye cinga ngolu hlobo lukaDavid Baker, isazi-mveliso yezinto eziphilayo eseSeattle esakha iFoldit. Akangeze alindele ukuba umntu waseMcKinney, eTexas ogama lakhe linguScott "iibhoti" uZaccanelli, owayesebenza ngemini njengomthengi wefowuni ye-valve, wayeza kuchitha iinyanga zakhe zokunyathela iiprotheni, ekugqibeleni ephakama kwindawo yesithandathu kwiFoldit, kwaye I-Zaccaenlli, ngaba ngumdlalo, ungenise idizayini ye-fibronectin echanekileyo kwi-fibronectin yokuba iBie Baker kunye neqela lakhe bafumene ngokuthembisa ukuba banqwenela ukuyihlanganisela ebhodini labo (Hand 2010) . Ewe, iAida Berges kunye noScott Zaccanelli ziyi-atypical, kodwa yile ngamandla ye-intanethi: kunye neebhiliyoni zabantu, kuyafana nokufumana i-atypical.
Okwesibini, enikezelwa lo bunzima ngokuqikelela ukuthatha inxaxheba, ndingathanda ukukukhumbuza ukuba ukudala iprojekthi yokubambisana ngokubambisana kunokuba yingozi. Unokutyhala umzamo omkhulu wokwakha inkqubo engabikho mntu uya kuyifuna ukuyisebenzisa. Ngokomzekelo, u-Edward Castronova-umphandi okhokelayo kwintsimi yezoqoqosho zehlabathi ezibonakalayo, enezibonelelo ze-$ 250,000 ezivela kwi-MacArthur Foundation, kwaye exhaswe liqela labaphuhlisi-bachithe phantse iminyaka emibini bezama ukwakha ihlabathi elithe ngqo apho unokuqhuba uphando lwezoqoqosho. Ekugqibeleni, umgudu wonke wawungaphumeleli ngenxa yokuba akukho mntu wayefuna ukudlala kwilizwe elithe tye likaCastonova; kwakungekho mnandi kakhulu (Baker 2008) .
Ngenxa yokungaqiniseki ngothathi-nxaxheba, okunzima ukuwuphelisa, ndiyasikisela ukuba uzame ukusebenzisa iindlela zokuqala zokuziqhelanisa (Blank 2013) : ukwakha iiprootypthi ezilula usebenzisa isofthiwe yeshefu kwaye ubone ukuba unokubonisa ukufaneleka phambi kokuba utyalole uphuhliso lwesofthiwe. Ngamanye amagama, xa uqala ukuvavanya umvavanya, iphrojekthi yakho ayiyi-kwaye ayifanele-ibonakale ifakwe njengeGalaxy Zoo okanye iBird. Ezi projekthi, njengokuba zikhoyo ngoku, ziyimiphumo yeminyaka yamagosa amakhulu. Ukuba iprojekthi yakho iyahluleka-kwaye oko kwenzeka ngokwenene-ngoko ufuna ukusilela ngokukhawuleza.